Aquarium shum catfang pengusius - content, compatibility
एक्वैरियम शार्क कैलिफ - एक्वैरियम शार्कको सामाग्रीमा उपयोगी सल्लाह
एक्वैरियम शार्क कैटफिशको अभिनेता बीचको लोकप्रिय रियल समुद्री लुगाहरू को लागि एक स्मार्ट लघु विकल्प हो। एक प्रसिद्ध दाँत प्रेताक राख्न असम्भव छ कि पानीको खाली ठाउँहरूमा डराउनु पर्छ, तर यी ताजा पानीको पानी कृत्रिम वातावरणमा जीवनको लागि अत्यन्त अनुकूल छ।
शार्क पन्तियस बिल्ली - विवरण
हाम्रो नायक को प्रकृति मा थाईल्याण्ड र लाओस को नदियों में पाया जा सकता है, विभिन्न चैनलों, अल्गा झीलों, कृत्रिम मूल के गर्म पानी की जलाशयों से अधिक हो गए हैं। यस कैटफिशबाट फिलेटले ठूलो मागमा छ, त्यसैले यो प्रजननको लागि सबैभन्दा लाभदायक माछा हो। एक्यूरीम पित्री को रूप मा, विशाल शार्क र हत्यारा व्हेल को समानता को कारण यस माछा को मध्यम आकार बढेको छ। इङ्कोचिना नदिहरु मा, पान्जीसियस एक मीटर भन्दा बढ्छ, र जब एक्वैरियममा रूखहरूमा राखिएको छ, यसले 70 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुन्छ।
एक्वैरियम प्यागैसस को धेरै किस्महरू छन्:
Siamese Pangasius। Pangasius hypophthalmus यसको उपस्थिति को कारण कैफिश शार्क को अत्यधिक पनीर पंगीसी या एक्यूरीम फ्रिज को पानी को शार्क को नाम मा प्रेमियों को बीच मा जानिन्छ। माछाको शरीरको रंग ब्लुश टिन्टको साथमा कालो खैरो छ, त्यसका छेउमा सिपाही ब्यान्ड जोडेका छन् जुन गिलबाट फाइनलमा दौडिन्छ। यसको झरना टाउको, फिन र पूरै यो प्राणीले हवर्नर हत्यारा व्हेल र शार्कलाई जस्तै बनाउँछ। पुरुष पानासासस महिला भन्दा सानो छ, तिनको शरीरको रङ्ग धेरै महान् छ। पेट कोठा शार्क को नजिकै चांदी छ, पंख हल्का खैरो छ।
Aquarium catfish। Pangasius sutchi एक शर्मीली माछा हो, यो सानो छ र एक्वैरियम को पर्खालहरुमा भय मा भाग लिन सक्छ। यो राम्रो छ कि यसलाई ठूलो लम्बी कंटेनरमा राख्न को लागी चोट को जोखिम कम गर्न को लागी राख्नुहोस। एक्वैरियम शार्क कैटफिश कम आक्रामक हो, जस्तै पानी को बीच तह मा रहें, वे आम तौर पर बड़े और मध्यम आकार की जलीय जीव के कई प्रजातिओं के साथ एक साथ रहते हैं। यो उप-प्रजातिहरूको Pangasiuses मालिकहरूलाई प्रयोग गरिन्छ, सधैँ कोठामा उनीहरूको उपस्थितिलाई प्रतिक्रिया गर्दछ।
Shum cat pangasius - सामाग्री
शार्क कैटफिश 24-26 डिग्री सेल्सियससम्मको तापमानमा राखिनुपर्छ। एक्वैरियमका लागि अनिवार्य आवश्यकता एक शक्तिशाली फिल्टर र 30% को नियमित तरल पदार्थ प्रतिस्थापनको उपस्थिति हो, यो प्रक्रिया साप्ताहिकमा हुनुपर्दछ। पानी कठोरता डीएच 2-20 देखि पीएच 6.5 देखि 8.0 सम्म छ। नाइट्रेट, अमोनिया र नाइट्रेटका लागि हेर्नुहोस्, पानीमा उनीहरूको उपस्थिति जनावरहरूको लागि खराब छ।
शार्क कैटफिश - एक्वैरियम छनौट गर्नुहोस्
शार्क कैटफि Pangangus को लागि, एक्वैरियम को एक ठूलो र उत्थान को आवश्यकता हो। माछाको ठोस आकार छ र ठाउँ चाहिन्छ, यदि तपाईसँग 350 लिटरको लागि जलाशय छैन भने, यो राम्रो छ कि यो सबै भन्दा राम्रो छैन। कन्टेनरको डिजाइनमा हामी सजावटी स्नैगहरू प्रयोग गर्दछौं, धेरै ठूला ढुङ्गाहरू, हामी रेतीले मिट्टी लिन्छौं। यो उष्णकटिबंधीय पोखरीहरू र नदाइहरू अन्तर्गत एक्वैरियमलाई सजाय गर्न मनमोहक छ, जहाँ यी प्राणीहरू टिकटहरू र पानीको पानीमा बाँधिएका छन्। उपकरण र फिल्टरलाई थप सुरक्षा चाहिन्छ, जब शक्तिशाली एक्वैरियम शार्कले डराएको छ सोम उपकरण तोड्न सक्षम छ।
शार्क क्याटफिश - अन्य माछा संग संगतता
यो रोचक माछा खरीद गर्न निर्णय गर्दा, तपाईंलाई शार्क क्याटफिशको आदानप्रदान गर्न आवश्यक छ, पत्ता लगाउनुहोस् कि यो राम्रोसँग सहकर्मीहरू कसले पत्ता लगाउँदछ र कसले रोजगारीको लागि खाना लिने कोसिस नगर्न सक्दछ। यो सानो जलीय प्राणीहरु को एक साथ pangasius साथ एकत्र गर्न को लागि अवांछनीय छ, उनि बस आफ्नो बचाव छिमेकीहरु खाई। सोमसलाई साझेदारको आकारमा बराबर चाहिन्छ, सम्भवतः सम्भावित खाना जस्तै। उपयुक्त प्रयोगशाला , सिचिलोहरूको ठूलो प्रजाति, बार्बिस, आईरिस। तपाईं धेरै पालिप्टरहरू, कलामिक, ग्युरमी, कालो माछा चाकू व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ।
एक्वैरियम माछा शार्क क्यालीफिश - हेरविचार
यो प्रजातन्त्रको घरको एउटा नमूना खरिद गर्न अचम्मलाग्दो छ, तिनीहरू तीन वा चार माछाको बगालमा राम्रो महसुस गर्छन्, जोडाहरूमा बस्छन्। साधारण शार्क क्याटफिश को पाङ्गैसीस को जीवन को लागि, क्षमता को आयामहरु र खाना को गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो, एक सानो जलाशय मा उनि ठूलो नहीं बढते। भर्खरै विदेश बाट ल्याइयो, स्थिर पानी मा प्राणीहरू खराब महसुस गर्छन्, एक्लोरीम सफा गर्ने बित्तिकै तिनीहरूको लागि प्राय: वातावरणको रासायनिक संरचना जाँच गर्नुहोस्।
माछा शार्क क्यालीफिश - प्रजनन
यो माछाको लागि प्रकृतिमा स्प्विच अवधिमा बृहस्पतिको बिचमा वा प्रारम्भिक गर्मीमा हुन्छ। शार्क कैलिफ पान्जीसियस एक गुणस्तरको खाली स्थान हो, यो अपार्टमेन्टमा यो उद्देश्यको लागि उपयुक्त परिस्थिति सिर्जना गर्न सम्भव छैन। एशियाई देशहरूमा, खेतहरूमा विशाल कृत्रिम तालाब प्रयोग गरिन्छ, विशेष माछा माछाहरू विशेष अभिकर्ताहरू र उपकरणहरूसँग सुसज्जित छन्। उत्पादकता बढाउनको लागि, उत्तेजना इंजेक्शनहरू2बर्ष भन्दा पुरानो व्यक्तिहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। एक मछलीघर मा आयोतित माछा किन्न को लागि amateurs को लागि अधिक प्रत्याशित छ।
शार्कले के गर्छ?
प्रश्न भनेको, एक मछलीघर मा एक शार्क कैटफिश कसरि पोषण गर्न को लागी आसान छ। किशोरतामा, उनी प्रोटीन फूड्स मन पराउँछन्, वृद्ध व्यक्तिहरू अक्सर सब्जी उत्पादनहरूमा स्विच गर्छन्। तिनीहरूले अज्ञात खाना, ट्याबलेट, लाइभ, उत्पादनहरू फ्लेक्सको रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्छन्। मिश्रित पोषण संग, कैफफिश सामान्यतया बढ्छ, एक दिन तीनवटा सानो माटो संग माछा द्वारा खाएको छ, जुन केहि मिनेट मा खाएको छ। खरगोशको साथ पशु उत्पादन चिन्ता जस्तै, सानो माछा, कीड़े, क्रिकेटहरू गर्नेछन्। सलाद जोड्नुहोस्, आहारमा ककडीर र बलुआको टुक्रा।
शार्क क्याटफिश - रोग
यदि तपाई जलीय वातावरणको उच्च गुणस्तर निस्पंदन उत्पादन गर्नुहुन्न भने पशुहरूले केही अंगहरू नष्ट गर्न सक्दछन् - एन्टेना, पंखहरू। जब एक्वैरियममा माछाले अल्सर घास देखेको छ भने उनीहरूले पोटेशियम अनुमतिगृहको मद्दतमा कवरेज प्रक्रिया प्रक्रिया गर्छन् वा हेलोवीन हरीको समाधान प्रयोग गर्छन्। विषाक्तता बिरुवा संग व्यवहार गरिन्छ, एक समय पछि जब बीमारी से शार्क कैट जाता है, वे इसे प्रोटीन खाद्य पदार्थों में स्थानांतरित करते हैं। Antiback प्रो को साथ रोटी र बैक्टीरियल समस्या हटाइयो, टेट्रा ContaIck, Tetra FungiStop, अन्य प्रभावी औषधि।
यी ओभरभोजहरूले धेरै र खुसीसाथ खाना खाए, यसको परिणामस्वरूप प्रायः शुरुवातहरुमा एक्वार्डिस्टहरूमा वर्ड समस्याहरु हुन्छन्। यो सिफारिश गरिएको छ कि एक्वैरियम शार्क कैफफिशले केहि द्रव्य दिनहरु को व्यवस्था गर्दछ ताकि तिनीहरू सामान्य मा फर्किए। सानो कन्टेनरमा राखिएको बेलामा ठूला चोटहरू हुन्छन्। परिणामी चोटहरूले गुणात्मक हाइड्रोमेटरी र एक्वैरैक्टियल एजेंटहरूसँग एक्वायरिम तरल पदार्थसँग राम्रोसँग निको पार्छ। कठिन अवस्थामा यो रोगको सही कारण प्रकट गर्न परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
बिल्लियों को सबै भन्दा दुर्लभ नस्लों र उनको सामाग्री को विशेषताहरु
कुत्तों को सबै भन्दा खतरनाक नस्लों
बिल्लियों को बंगाली नस्ल
कुत्तहरुको लागि गाडी
के म बिरालो वालेरिया दिन सक्छु?
Hamsters किन आफ्नो शाहरुख खान्छ?
पिल्ला केटाको लागि नाम
बिरामीको लागि Ivermek
Ahatina Snail - केयर
बिल्ली नस्ल रूसी नीलो
अस्ट्रेलियन स्काइकी बिरालो
सीजारायण खण्ड कसरी छ?
क्रीम संग क्यूबुलहरु बच्चाहरु को परिचित शुभकामनाहरु को सर्वश्रेष्ठ व्यंजनहरु हुन्
संसारमा सबैभन्दा सानो देश
घट्दो चर्को कम गर्न विधि
मटर को किसिमहरु
महिलाको हल्का वजन भेडाकोट कोट
नीलाबेरीसँग पाइईको लागि नुस्खा
ऊँचाई र वजन मीला कुनिस
समुद्री शैवाल फोकस
Tannins - शरीरमा प्रभाव
Polycystic ovary - के म गर्भवती हुन सक्छु?
उचित खरीदारीको नियम
पनीर संग सोपर्स
एम्बुलेट फ्यागको भेडा
गर्मीको लागि आवास
कला संग्रहालय कला